6 Soso-kevitra mba hisorohana Izany Voalohany Date tsy ho ny Last
Daty voalohany. Efa tsy andrintsika ny fotoana mahagaga. Izy ireo dia afaka ny ho nampientanentana be, nefa mampahatahotra. Amin'ny fomba maro, ry zareo mitovy amin'ny asa ny resadresaka. Ace izany, ary afaka manantena ny ho avy perks, fandrisihana, ary farany fisondrotana. (Ary aoka ho tsara ny manantena "fampisehoana Review".)
Etsy ankilany, manao ny tsy mety fitafiana, mifampiresaka awkwardly, na miseho ho tsy ampy fahasoavana fototra ara-tsosialy, ary afaka hadino nantsoina indray mba handroso.
Ary ndao hatrehina izany: Mety ho masiaka be ny fifaninanana eo amin'ny samy Arenas.
Ireto misy 6 fanao ianao te-hanaraka ho "Standard Operating Fandidiana" ho an'ny rehetra-zava-dehibe voalohany daty.
1. Ataovy ny tsara indrindra hatrany tongotrao.
Ho ara-potoana. Akanjo ny fahombiazana. Ataovy ny finday eo no mamarana. Tsy misy zavatra mety ho disruptive na mahasorena kokoa noho ny manana ny finday mandeha eny foana mandritra ny sakafo. Raha tsy maintsy maka antso avy amin'ny olona iray, (satria zava-dehibe) miezaka ny manao izany fohy– ny miala tsiny.
Tadidio fa "tsy mahazo ianao faharoa fahafahana hanao fahatsapana voalohany."
2. Henoy tsara.
Tsy izao no fotoana ho mibodo ny mofo sy ny resaka.
Raiso liana amin'ny mahafantatra ilay olona. Zarao ny zavatra na roa mikasika ny hoe iza ianao ary inona no tsapanao mahatonga anao irery ianao. Tsy fametrahana fanontaniana intrusive.
3. Mety foana.
Tsarovy, ny tanjona eto dia ny miorina avy amin'ny fomba tsara.
Aza tsikera mavaivay momba ny lasa tsy fifandraisana, lazao eny miloko vazivazy, na hitondra tena henjana ho mpanome tolotra. Mety hahatonga anao ho tonga manerana uncouth.
4. Tandremo ny vatana fiteny.
Fantatrao ve fa 93% ny fifandraisana dia voalaza fa tsy am-bava?
Zavatra toy ny fihetsika, endrika, masony sy ny vatana toerany afaka manampy anao mba hijery raha toa ka ny daty dia tafiditra ary liana, na manantena very ianao isany. Araho ny famantarana.
5. Aza mandeha "Anarana iombonana!"
Bola tokony ho tonga eo anatrehanao ny olon-tiany na oviana na oviana amin'ny daty voalohany. Ary cheapness dia voafaritra indray-eny ho an'ny ankamaroan'ny olona. Raha vola ianao fanamby, mamoron; Diniho ny matsiro sakafo masaka an-trano miaraka amin'ny labozia sy ny mozika.
6. Hifarana amin'ny naoty tsara.
Hamindra fo. Raha nanana fotoana tsara, milaza izany. Exits dia zava-dehibe toy manomboka.
Manaraka ireo toro-hevitra ara-potoana enina mba hahatonga ny daty voalohany aloha ny tahan'ny!
Mety ho izany fotsiny ny fiandohan'ny zavatra manokana.